भिखारी महिलाको बैंक खातामा १० करोडभन्दा बढि पैसा भेटिएपछि सबै चकित,सामाजिक सन्जालमा खैलाबैला - Hamro Abhiyan
भिखारी महिलाको बैंक खातामा १० करोडभन्दा बढि पैसा भेटिएपछि सबै चकित,सामाजिक सन्जालमा खैलाबैला
एजेन्सी। एक भिखारी महिलाको खातामा १० करोड ? हो पत्याउन गाह्रो भएपनि यो कुरा साँचो हो । लेबनानमा एक भिखारी महिलाको बैंक खातामा १० करोडभन्दा बढि रकम भेटाएपछि सबै अच्चम्मित भएका छन् । यो राशी महिलाले मागेर नै जम्मा गरेको पनि खुलेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मिडियाले जनाएअनुसार लेबनानकी वाफा मोहम्मद अवद नाम गरेकी एक भिखारी महिलाले १० वर्षको बीचमा १० करोडभन्दा बढि रुपैयाँ जम्मा गर्न सफल भएकी थिइन् । एक बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा ट्रान्सफर गर्नको लागि बैंक पुगेकी ति महिलाले १० करोडभन्दा बढि रकम जम्मा गरेको भेटिएको थियो । भिखारी महिलाको एकाउण्टमा १० करोडभन्दा बढि रकम भेटिएपछि उक्त घ’टना समाजिक सञ्जालमा पनि निकै भाईरल बनेको छ ।
إغلاق البنك الشهير في #لبنان “جمال ترست”، يفضح قصة متسولة لبنانية معروفة في #صيدا باسم الحاجة “وفاء عوض” تبين أنها “مليونيرة” وتملك برصيدها البنكي حوالي 900 ألف دولار، بعد اضطرارها لسحب أموالها ونقلها، ليُكشف أمرها وتنتشر صور شيكات باسمها على مواقع التواصل.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/8XrFpRfMT2
हस्पिटलको अगाडि १० वर्षदेखि भीख माग्दै
वाफा सीदोन शहरकी ती महिलाले लेवनानकै एक प्रसिद्ध हस्पिटल अगाडि गत १० वर्षदेखि भीख माग्दै आएकी थिइन् । उनी प्रायः हस्पिटलको गेट वरपर बसेर भीख माग्ने गरेकी थिइन् । गल्फ न्यूजका अनुसार हस्पिटलका कर्मचारी र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले ति महिलालाई भीख माग्ने महिला भनेर चिन्दछन् ।
यो पनी पढनुहोस : बजारमा न’क्क’ली नोटको बिगविगी ! यसरी चिनौ न’क्क’ली र स’क्कली नाेट
काठमाडौँ /पछिल्ला केही बर्षयता नेपाली नोटहरु न’क्क’ली भेटिएपनि त्यति धेरै बजारमा आएका थिएनन् । तर पछिल्लो समय न’क्क’ली नोटहरु धेरै बजारमा देखिन थालेका छन् । बजारमा पुगेका नोटहरु बैंकसम्म पुग्ने गरेका छन् । दैनिक १० वटा भन्दा बढी न’क्क’ली नोटहरु बैंकसम्म पुग्ने गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।पछिल्लो समय भारतजस्तै नेपालमा पनि नक्क’ली नोटको धन्दा शूरु भएको छ । न’क्क’ली नोटको पहिलो शिकार गाउँका सोझा नागरिक पर्ने गरेका छन् भने बढी ब्यस्त हुने पसलहरु पनि यसको मारमा परेका छन् ।
चीनमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या क्रमश घट्दै
र’क्तदानपछि बिस्कुट नदिएको रि’समा एक युवकले पिए आफ्नै र’गत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वेबसाइट केपीशर्माओलीडटकममा पो’र्न भिडियो अपलोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कार्यालयमानै र”क्सीको बो’तल सहित…